Shina: Miloa-bava ireo mpisera MSN voakatona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2018 15:51 GMT
Niharatsy hatrany ho an'ireo mpampiasa ny tolotra MSN any Shina ny zava-drehetra satria nanova ny fidirana kaonty Passport ho Live.com ny Microsoft vao haingana. Taorian'ny nanoratan'i Frank Dai, bilaogera ato amin'ny Global Voices lahatsoratra momba io olana io, tapa-bolana lasa izay, nanomboka nampiaka-peo ireo mpisera MSN Messenger, Hotmail sy MSN Spaces marobe.
Wen Yunchao- izay manoratra ao amin'ny bilaoginy MSN Spaces, Ramblings of a Drunk, lahatsoratra isan-kerinandro momba ireo zavatra rehetra voasivana sy ny Shinoa- namoaka lahatsoratra vao haingana mikasika izay fantany avy amin'ireo olona mpifandray amin'ny mpanjifa MSN sy ireo namany miasa ao amin'ny Teknolojiam-baovao:
NetNews mpivoaka isan-kerinandro, 11 May 2006: Hafahafa tsy mahazatra.
Tsy araka ny mahazatra ny fidirana ao amin'ny MSN Messenger.
Hatramin'ny 8 May, tsy afaka nidirana ny MSN Messenger, tsy mifandray tampotampoka ary nanjavona tany Beijing sy tany an-tanàndehibe hafa. Nilaza ireo manam-pahaizana momba ny Teknolojiam-baovao fa “ity no fotoana voalohany nahitana fahatapahana maharitra sy miely patrana hatramin'ny nidiran'ny MSN tany Shina.” Nilaza ny mpitondratenin'ny MSN fa tsy misy ifandraisany amin'ny tolotra omen'ny MSN ny tsy fetezana fa ny “antony lehibe indrindra dia misedra olana ny fametrahana ireo tambajotra ao an-toerana. Efa nanomboka nanadihady ny olana ny MSN ary hamaha azy haingana araka izay tratra.” Manana mpisera mihoatra ny folo tapitrisa ao Shina ny MSN Messenger ary any ampitan-dranomasina ny lohamilin'izy ireo, noho izany tsy voaaramason'ny sampan-draharaha Shinoa isan-tsokajiny ny votoaty alefa. Nahatonga ireo olona maro hanontany tena ny tsy maha-ara-dalàna ny MSN Messenger sy ny olana vao haingana amin'ny fitsidihana ny bilaogy MSN Spaces.
Bilaogera namana MSN Spaces, Tate King, nanolotra fomba fijery manokana kokoa:
Nahoana no mitranga izao
Fotoana ela be taorian'ny naha-tafidirako tao amin'ny MSN; tsy nanoratra zavatra vitsivitsy tiako hosoratana aho. Henoko fa noho ny fanakatonan'ny Antoko Mahafinaritra ny Live.com no nahatonga izany. Tsy mora ny mahita toerana misy olona sarotiny vitsivitsy ary ankehitriny tsy mamela antsika hampiasa izany ny Antoko Lehibe, Mamirapiratra, Tsy Manampahadisoana. Toherin'izy ireo ny tohanan'ny ankamaroan'ny olona, manizingizina hitàna izay toherin'ny olona izy ireo. Inona loatra ity??
Araka ny fitarainana tao amin'ny blaoginy Sina, na dia ny mpihira, ny mpamily fiara rallye, ny mpanoratra lahatsoratra taompolo faha-80 ary ilay bilaogera bluechip Han Han aza dia manana olana amin'ny MSN:
Nahoana aho no tsy afaka miditra amin'ny MSN? Avy amina lahatsoratra milaza hoe ‘Miala tsiny, tsy afaka miditra ao amin'ny XXX; andramo indray azafady. ‘ Manontany tena aho amin'ny XXX: Fa nahoana? NAHOANA? Y?